Isniin, Bisha Labaad 08, 2016 Wakhtiga Geeska Afrika 02:45
Dhageyso Hambalyada Iyo Heesaha
Dhageyso Barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, oo maanta xiiso gaar ah leh,waxana si wada jir ah halkan idin kala socodsiinayaa Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Hore Dhageyso Barnaamijka Hambalyada & HeesahaBarnaamijka waxa toddobaadkan diyaar la ah Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan ee dhageyi habboon.
Dhageyso Hambalyada iyo HeesahaBarnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo maanta xiiso gaar ah leh, waxaa si wada jir ah halkan idin kaga daadihinaya Ibraahim Xasan Daandurey iyo Caasho Ibraahim Aaden (Cuud) dhageysi wanaagsan.
Barnaamijka Hambalyada iyo HeesahaDhageyso Barnaamijka Habmalyada iyo Heesaha oo maanta xiiso gaar ah leh, waxaana si wada jir ah idinku daadihinaya Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Barnaamijka Hambalyada & HeesahaDhageyso Barnaamijka Habmalyada iyo Heesaha oo maanta xiiso gaar ah leh, waxaana si wada jir ah idinku daadihinaya Ibraahim Xasan Daandurey iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Barn: Hambalyada iyo Heesaha Dhageyso barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad ku dhageysataan dhambaalada loo diro dadka is-guursada iyo waliba kuwa dhashaa.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Barnaamijka Hambalyada iyo HeesahaKu soo dhowaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo ay innala socodsiinayaan, Maxamed Colad iyo Ibraahin Xasan Daanduray.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Martida: Wasiir ku Xigeenka Caafimaadka Ku soo dhowaada barnaamijka Martida Makaroofanka oo idinkaga imaanaya magaalada London. Waxaa marti ku ah Wasiir Ku Xigeenka Caafimaadka dowladda Somalia Cusmaan Maxamed Cabdi.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Ku soo dhowaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo ay innala socodsiinayaan, Caasha Ibraahin Aadan "Caasha Cuud" iyo Ibraahin Xasan Daanduray.
Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Barn. Hambalyada iyo Heesaha
Barnaamijka Hambalyada iyo HeesahaKu soo dhowaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha oo ay innala socodsiinayaan, Caasha Ibraahin Aadan "Caasha Cuud" iyo Ibraahin Xasan Daanduray.
Barnaamijka Hambalyada iyo HeesahaKu soo dhowaada qayb kale oo xiiso leh oo ku saabsan barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha, waxana innala socodsiinaya Caasho Cuud iyo Daandurey .